एयरहोस्टेसले विमान भित्रै यस्तो कार्य गरिरहेको २ भिडियो लिक भएपछि…. – Online Saptarangi
एयरहोस्टेसले विमान भित्रै यस्तो कार्य गरिरहेको २ भिडियो लिक भएपछि….
October 15, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on एयरहोस्टेसले विमान भित्रै यस्तो कार्य गरिरहेको २ भिडियो लिक भएपछि….
पाकिस्तान महिलाहरुका लाागि अन्य देशहरुको दाँजोमा कडा भएको समयसमयमा ब्याख्या हुने गर्दछ । पुर्व नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी मलाला युसुफ पनि पाकिस्तानी नै हुन । उनले महिलाहरुले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउदा पटकपटक चरमपन्थी हमलाको शिकार हुनु परेको थियो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनीहरुले पोशाकमा नै टिकटक भिडियो बनाएका थिए । पुरुष एयरहोस्टेसलेपनि पाइलटको ड्रेस लगाएर साथ दिएका थिए । उनीहरुको भिडियोले पेसालाई नै बदनाम गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो । यद्यपी भिडियोमा भने फिल्मी लभ स्टोरीमा पाइलट र नर्सको प्रेम देखाउन खोजिएको थियो । एजेन्सी ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
थप ३७४९ जनामा कोरोना पुष्टि, १९ जनाको मृत्यु
चिसोले गर्दा हात खुट्टाको जोर्नी, घुँडा दु खेर है रान हुनुहुन्छ ? यी घरेलु उपा य अपनाउनुहोस्
November 1, 2020 November 1, 2020 Prakash Waiba